Esi gbanwee mmegharị nke mmegharị ngosi abụọ na AirPods | Esi m mac
Esi gbanwee mmegharị ngosi ngosi abụọ na AirPods
Gobọchị na-aga ma m ka na-eche na AirPods Ha enweela ihe ịga nke ọma na akụkụ Apple, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ekwu ma ọ bụghị. Agbalịrị m ekweisi ndị ọzọ, ụfọdụ dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ dị oke ọnụ ma abiara m na nkwubi okwu na ogo Apple emewo ka obere ọrụ ebube nke injinịa a nabatara nke ọma ma ọ bụrụ na ọ bụghị.
Ihe ọbụla bụ uche gị, aga m aga n'ihu ịkọrọ gị uru nke obere ndị a ebe m nwere ha ka ha na-eso m ebe niile ma ana m eburu ha Igbe igbe n'ime obere akpa nke akpa n'akpa uwe, ọ dabara n'ụzọ zuru oke.
Otu n'ime ihe ndị m kacha hụ n'anya banyere ekweisi ndị a bụ nha ha na echiche ha. Anyị nwere igbe igbe nke na-enweghị ibu karịa igbe ezé eze na anyị nwere ike iburu ya mgbe niile n’ebughị n’obi na ọ na-anyịgbu anyị. Tụkwasị na nke ahụ, nnwere onwe zuru ezu ma ọ bụ na ọ na-ezute oge awa Apple kwuru. E wezụga njikọ m iPhone, Mac ma ọ bụ Apple Watch bụ ozugbo ekele maka mgbawa W1.
Mana hey, anyị ekwuola n’oge ndị ọzọ gbasara njirimara niile ekweisi ndị a nwere. Taa, anyị chọrọ ịkụziri gị ka ị gbanwee omume nke ọrụ ya yana, ọ bụ ezie na agụrụ m ọtụtụ isiokwu na-akatọ eziokwu ahụ bụ na Apple emejuputala naanị ngosipụta nke okpukpu abụọ na ekweisi ịkpọku Siri, ọ dịghị onye n'ime ha na-ekwu maka nke ahụ gbanwetụrụ ma mee mgbe anyị na-enweta okpukpu abụọ, kwusi ma kpọọ egwu kama ịkpọ Siri ma ọ bụ nwee ụdị mmegharị ahụ.
Iji jikwaa ihe anyị gwara gị ihe ị ga - eme bụ itinye mmasị Bluetooth nke AirPods. Enwere ike ime ihe a site na Ntọala> Bluetooth> AirPods <i na iPhone, mana site na Mac ị nwekwara ike ịbanye Mmasị Sistemụ> Bluetooth> AirPods> Nhọrọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihuenyo, ị nwere ike ime mgbanwe atọ na ọrụ nke ekweisi. I nwere ike ịgwa ha na igwe okwu nke ekweisi abụọ na-arụ ọrụ ọzọ, na ọ bụ naanị aka nri ma ọ bụ naanị aka ekpe na-arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike hazi okpukpu abụọ na ha ka a kpọọ Siri, ime ya Cheretụ ma kpọọ ma ọ bụ gbanyụọ ya Na n’ikpeazụ ị nwere ike iwepu ntị ka achọpụtara ya ma yabụ ọ bụrụ na i wepụ otu n’ime AirPods, ọkpụkpọ anaghị akwụsị. Obi abụọ adịghị ya, amaara m na mgbe ị nwere AirPods gị, ị ga-eji echiche ọhụụ ọhụrụ a pụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Esi gbanwee mmegharị ngosi ngosi abụọ na AirPods
bugharia ya dijo
Anaghị m arụ ụka na ịrụ ọrụ ya zuru oke, mana nhazi ya adịghị mma maka mmewere nke ọtụtụ ntị na-enweghị ike idobe ha.
Esi eweputa nseta ihuenyo n'egosighi mmetụta onyinyo
Mozilla na Chrome kwupụtara agha na webụsaịtị adịghị mma